भारतको केरलमा कम्युनिस्ट नेताको हत्या, घटनामा आरएसएस संलग्न भएको आरोप- विश्व - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — भारतको केरलमा एक जना कम्युनिस्ट नेताको हत्या भएको छ । केरलको तिरुवल्लामा बिहीबार सीपीआईएम(एम) का स्थानीय सचिव सन्दीप कुमारको हत्या भएको हो ।
बिहीबार राति ८ बजे चक्कु प्रहार गरी उनको हत्या भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनको शरीरका ११ ठाउँका चक्कु प्रहारबाट घाउ भएको थियो । उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बथाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सन्दीपले एक जना कथित रूपमा नशामा रहेका एक जना व्यक्ति र पसलेबीच भएको विवाद सुल्झाउन खोजेका थिए । त्यसपछि उनको मोटरसाइकललाई पछ्याइयो र उनको हत्या गरियो ।
CPI(M) strongly condemns #RSSterror
RSS has murdered one more of our comrades. PB Sandeep, CPI(M) Local Committee secretary was murdered by RSS criminals today at Peringara in Thiruvalla (Pathanamthitta District). pic.twitter.com/TaxaQ8M7Mb
— CPI (M) (@cpimspeak) December 2, 2021
सीपीआई(एम) ले घटनाको कडा निन्दा गर्दै हत्याका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) लाई जिम्मेवार ठहराएको छ । पार्टीले ट्विट गर्दै भनेको छ, 'आरएसएसले हाम्रा अर्का एकजना कामरेडको हत्या गरेको छ । सीपीआई(एम) का स्थानीय सचिव पीबी सन्दीपको तिरुवल्लाका परिनगरामा हत्या गरिएको छ।'
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १०:३२
विवाह महोत्सवको तयारीमा जनकपुर
महिनादेखि फोहोर उठेन, दुर्गन्ध बढ्दा महोत्सव प्रभावित हुने जोखिम
जनकपुर — देश–विदेशका हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुने रामजानकी विवाह महोत्सव आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । मूल कार्यक्रम भने मंसिर २२ मा हुनेछ । जानकी मन्दिरले सार्वजनिक गरेको वैवाहिक कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार जनकपुरधाम नगरदर्शन, शनिबार फूलबारी लीला, आइतबार धनुषयज्ञ, सोमबार तिलकोत्सव, मंगलबार मटकोर, बुधबार स्वयम्बर तथा शुभविवाह तथा बिहीबार रामकलेवाको आयोजना हुनेछ ।
महोत्सवमा राम जन्मभूमि भारतको अयोध्याबाट साधुसन्तहरू जन्तीको रूपमा आउँछन् । कार्यक्रम जानकी मन्दिर तथा ऐतिहासिक रंगभूमि मैदानमा हुनेछ ।
महोत्सवको तयारी भइरहँदा जनकपुरको बजारक्षेत्र र सडकमा भने फोहोरका डंगुर छन् । एक महिनादेखि फोहोर उठ्न नसकेको हो । फोहोर नउठेपछि झाडापखालाको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय रुष्ट छन् । अर्कातिर महोत्सव नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । जसलाई ध्यानमा राख्दै बिहीबार जानकी मन्दिर र रंगभूमि मैदानमा सफाइ गरियो । तर बजारमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन उपमहानगरले चासो दिएको छैन । पालिकाका सफाइकर्मीले तिहारपछि नगरको फोहर उठाएका छैनन् ।
उपमहानगरका एक अधिकृतले डम्पिङ साइट नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । जग्गाको खोजी भए पनि स्थानीयले विरोध गर्दा साइट निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १०:२३
नर्वेमा ५-११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन पाइने
सत्ता कब्जापछि अफगानिस्तानमा पहिलो पटक खुल्यो एटीएम सेवा